Creativity Archives - Barataa Technologies - Giddu Gala barnootaa fi Odeeffannoo
Namni kamuu jireenya yeroo qofa adunyaa tana irra jiraata. Gaafa guyyaan xumuraa dhufe biyya lafaa tana dhiisee gara adunyaa biraatti godaana. Gaafa lubbuun jiru wanta horate(qabeenya) fira yookiin aantee isaa dhaalchisee darba. Qabeenyota namni tokko horatu keessaa tokko facebook dha. Facebookiinis akkuma qabeenyota biro fira yookiin aantee yookiin namni ati barbaadde kamiifiiyyuu gaafa ati duute dhaalamuu ni danda’a. Gaafa namni tokko du’e…
Akkam jirtan hordoftoota marsariitii www.barataa.com? Nageeny badhaadhaa? Marsariitii haaraa Afaan Oromoo oduu aagaa qabattee dhufte takkaan wal isin barsiisuu feena. Maqaan marsariitichaa www.jirraapress.com yoo tahu, marsariitii oduuwwanii fi bashananaati. Kana malees, marsariitii hawaasummaati. Itti fayyadamaan irratti galmaa’uudhaan odeeffannoolee gara garaa waliif iddoo itti danda’uudha. Itti fayyadamaan marsariitii ##jirraapress fayyadamu tokko, guyya guyyaan maallaqa argata. Maallaqni kun kan sobaa osoo hin taane, kan…
Ana, Alifu dha. Akkaataa blog itti eegale waan muraasa isiniif qooda maxxansa kana keessatti. Waggoota muraasa gara duubaa isin deebisuufan. Isinis na faana deebitu jedheen yaada. Jalqaba bara 2013ti yeoon isaa. Waa’ee biloogii wanti an beeku baayee hin turre. Yeroo sanatti facebook qofa fayyadama moobaayila koo irratti. Weebsaayitoonni gara garaa facebook irratti yoo hiraman nan arga. Namoonni hedduun weebsaayitii san irratti waan…
Hunda keenyaaf WhatsApp fi Telegram maal akka tahan ibsuun barbaacisaadha natti hin fakkaatu. Maaliif yoo jenne bilbila hunda keenyaa irratti ni argamu waan taheef. Maxxansa kana keessatti garaagarummaan jara lamaanii maal akka tahe qabiyyee fi tajaajiloota isaan kennan irratti hundaa’uudhaan ilaalla. WhatsAppn hanga ammaatti itti fayyadamtoota biliyoona 1.7 ol kan qabu yoo tahu, telegram immoo itti fayyadamtoota miliyoona 200 ol kan qabuudha.…
Biyyoonni addunyaa kanaa sadarkaa umrii dargaggummaarratti ilaalcha garaagaraa haa qabaatan malee,gahee dargaggootni misooma fi guddina biyyaa keessatti qabanirratti yaada waldhibu baay’ee hin qaban. Dargaggeessi lubbuusaa itti gabbaree qabduu dhiiga isaan biqilchee ijaara. Erga biyya gama siyaasaan maqaa itti godhee ammoo humna diinagdeetiin biyyiti akka of dandeettee dhaabattuuf wareegama lammaffaa baasa. Ardiin nuti har’a irra jiraannu dacheen Afrikaa dhiiga ilmaan isheen dhaabbatte. Dhaloonni…
Barnoota WordPress – Kutaa 1ffaa
By Alifu Haji	Creativity, Technology, WordPress December 12, 2018
WordPress Maaliidha? WordPress jechuun moosaajii yookiin software madda banaa/open source tahee tola marsariitilee gara garaa hojjachuuf nu tajaajiluudha. Marsariitilee xixxiqqoo irraa jalqabee hanga marsariitilee gurguddootti kan jirun hedduun isaanii yeroo ammaa wordpress dhaan kan hojjatamaniidha. Addunyaa saayiberii kana keessa kan jiran marsariitileen dhibbantaan 30 kan hojjatamaniin wordpress dhaan. WordPress Eenyu faha itti fayyadama? Dhaabbilee mootummaa irraa kaasee hamma dhaabbilee dhuunfaatti, manneen amantaa…
By Alifu Haji	Creativity, Lifestyle, Technology November 23, 2018
Yeroon jijjiiramee jira. Ijoolleen akka duraatti too’achuun baayee rakkisaa taheera. Garuu immoo akkumma ijoollee balaa gara garaa irraa ittisnu balaa gama intarneetiin isaan muudatus ittisuuf dirqama qaba matiin. Garuu immoo akkamitti too’achuu danda’u balaa gama intarneetaan isaan qunnamuu danda’uun? Akka isaan intarneeta hin fayyadamne gochuudhaa? Lakki, intarneeta irraa tiksuun baayee waan danda’amuu miti. Sababani isaa jaarraan keessa jirru jaarraa dijitaalaa waan taheef.…
Roobootiin gara garaa akkamitti akka tolfaman yaaddee beektaa? Akka duraa miti, wantoonni hedduun dura fiilmii irratti arginu hedduu tahaa jiru. Artificial Intelligence kan jennu, qorannaa sirna koompiitaraa, moosaaji yookiin koompiitara akka namaatti hojjatu ykn yaadu uumuuf taasifamuudha. Hiikni isaaf kennamu bal’aadha, gabaabsee akkasitti hiike. Galmaa fi kaayyoo AI Kaayyoon AI iddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaa kaayyoo yeroo gabaabaa keessatti tahuudha.…